umthetho wabucala - I-Ocean-Components.com
I-Ocean-Components.com ikhusela iinkcukacha zakho, kwaye ungazivezi, ziqashe okanye zithengise umntu wesithathu.
Ungandwendwela iwebhusayithi yethu ungasixeleli ukuba ungubani na okanye usinike naluphi na ulwazi ngawe. Nje ukuba ufune isicelo sekhoteyishini, kuya kufuneka ugcwalise iphetshana lesicelo lethu lolunye ulwazi. Ukuba ukhetha ukusinika ulwazi lomntu, indawo yethu iqokelela kuphela ulwazi olunikezwe ziindwendwe ngokuzithandela. Siza kuqokelela kwaye sigcine le nkcukacha yobuqu ilandelayo:
Idilesi ye-imeyile, ulwazi loqhakamshelwano, ukuze uphendule imibuzo
Ulwazi ngezemali, iinombolo zeakhawunti yebhanki, ukuqhubekeka nokuthenga iiodolo
Ukuthumela, ukubiza okanye enye ingcaciso yokuhambisa izinto ezi-odoliwe
Olunye ulwazi, kubandakanywa ulwazi oluqhelekileyo lwewebhu log kunye nabasebenzisi idilesi ye-IP
Wamkelekile kwi-Ocean-Components.com. Kwi-Ocean-Components.com, ubumfihlo bakho kunye nokukhusela ulwazi lwakho lomntu kusingathwa ngendlela enkulu. Isiteyitimenti esilandelayo siza kukwazisa malunga nendlela esiyisebenzisa kwaye silawula ngayo ulwazi esaziqokelela. Qho xa undwendwela i-Ocean-Components.com, iseva yethu izazi ngokuzenzekelayo kwaye ifaka idilesi ye-IP. Idilesi ye-IP sisiseko sedilesi yekhompyutha esenza isicelo kumncedisi wewebhu. Akukho lwazi lomntu okanye iinkcukacha ezifunyenwe kolu nxibelelwano lwedatha-umkhangeli weendwendwe awuyenzelwanga ukuba unikeze olu lwazi.
Kwi-Ocean-Components.com, iidilesi ze-IP iindwendwe zihlala ziphononongwa kwaye zihlalutywe ngenjongo yokubeka iliso, kunye nokuphucula ukuphuculwa kweWebhusayithi yethu kuphela, kwaye abayi kwabelwana ngayo ngaphandle kwe-Ocean-Components.com. Ngexesha lokutyelelwa kwewebhu, sinokukubuza ulwazi loqhakamshelwano (idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba, inombolo yefeksi kunye nedilesi yokuhambisa / yokuhlawula) Olu lwazi luqokelelwa ngokuzithandela-kwaye kuphela ngemvume yakho.
I-Ocean-Components.com inomxholo, iinkonzo, intengiso kunye nezinye izinto ezinxibelelana newebhusayithi ezisebenza ngumntu wesithathu. Asinalo ulawulo lolwazi lomntu oluqokelelwe zezi ndawo, kwaye azinoxanduva lokuchaneka kunye nomxholo wale ndawo.
Olu xwebhu lujongana nokusetyenziswa kunye nokuchazwa kolwazi oluqokelelwe kuthi, imigaqo-nkqubo eyahlukeneyo inokufaka isicelo kubantu besithathu. I-Ocean-Components.com ayilawuli ezinye iisayithi, kwaye lo Mgaqo-nkqubo wabucala awusebenzi kubo. Siyakukhuthaza ukuba ubhekise kwimigaqo-nkqubo yabucala yabo bantu besithathu apho kufanelekileyo.
Iikuki zilula iifayile ezibekwe kwikhompyuter yakho, kwaye zikhuselekile njengayo nayiphi na idatha egcinwe kwikhompyuter. Iicookies ziyenziwa ziiwebhusayithi kwaye zisetyenziselwa ukugcina idatha ukulungiselela undwendwe. Icookie ayinakusetyenziswa yiwebhu ngaphandle kweyona iyenzileyo, okanye ifunde idatha kwikhompyuter yakho ngaphandle kwedatha egcinwe kuyo. Idatha esikhetha ukuyigcina kwiikuki zethu inokungabandakanyi ulwazi lwezezimali, ulwazi loqhakamshelwano, okanye enye idatha yobuqu kunye nebucayi. Indawo yethu isebenzisa kuphela iicookies ukukhumbula ukhetho lweendwendwe zethu ukuhambisa imixholo abayifunayo ngokukodwa.
Sinelungelo lokwenza utshintsho kwimigaqo-nkqubo yethu yabucala nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso sangaphambili.